Imoto isebenzisa eziningi izakhi lobuchwepheshe. Esinye salezo eziveza ihabhu. UAZ nabo afakwe. Iyingxenye ebalulekile noma iyiphi imoto. Phela, leli eziveza inikeza Ukujikeleza abushelelezi idrayivu namasondo eliqhutshwa emhlabeni i-eksisi. Lokhu engeyokuqala bacindezelekile okukhulu. Ngakho-ke, kungenzeka ukuthi ngaphambili ihabhu eziveza Oise kungase igoqe. Uyini umthombo timphawu, yiziphi izimpawu ukwehluleka futhi kanjani esikhundleni? Konke lokhu - kamuva kulesi sihloko.
Isikhathi sempilo isilinganiso isici ecishe ibe yizinkulungwane 150 amakhilomitha. Kodwa-ke Kuyaphawuleka ukuthi lesi sibalo zingafani ezibonakalayo. Ngesinye UAZ "Patriot" eziveza futhi zingaba izinkulungwane 300, futhi ngakolunye ukugoqwa kusenesikhathi ungagcina 40.
Ukunikeza ukwehluleka kwenzeka ezimweni eziningi ngenxa yokuntuleka Lubrication. Singasho igezwa yezinyoni. Ikakhulukazi ngokuvamile kwenzeka ku imishini ukuthi asetshenziswa off-road. Lapho bewela enye amanzi ezibukweni uthola hhayi kuphela amabhuloho futhi ibhokisi, kodwa Oise eziveza ihabhu. Ngenxa yalokho, i-cell usebenza "owomile." Ngaphezu kwalokho, ihabhu nithela Oise ehluleka ebukhoneni ukungcola okuqinile. Izintuli nokungcola uzosebenza yezinyoni njengenhlangano athile. Umthamo omkhulu kuphinde kube yimbangela ukwehluleka eziveza isondo. Uma umshini livame ukusetshenziswa ku ezindaweni ezimagebhugebhu, alungele esikhundleni olusondelayo esindayo. Futhi, isici akawuthandi imigodi emikhulu. Ngisho esikhathini off-road iphrofayela okusezingeni eliphezulu amathayi zonke semfene okufanele kwenzeke kakhulu ngokucophelela. isondo eziveza akawuthandi ukushayela inobudlabha. Ngaphandle amagalelo adluliswa kwezinye izakhi ukumiswa. Lokhu shock absorbers futhi bushings iziyisikhombisa (endabeni "Patriot" ne front ukumiswa). Ezimweni ezingavamile, imbangela yokwehluleka umshado endaweni yokukhanda. Yingakho UAZ ihabhu eziveza (inombolo 127 509 kwisikhangisi) liyana izinkulungwane 30, nakuba ithela ukuphila ngenye indlela ehluke kakhulu.
Indlela efanele yokufaka - isibambiso imithombo eliphezulu
Kuthiwani uma ngemva esikhundleni isici uhlulekile futhi? Futhi hhayi 30, futhi u 3000 km? Zonke ndaba esimweni esingafanele. Lona omunye izizathu ezijwayeleke kakhulu kungani amabombo isondo behluleka. Uma usetha into akuyona ngesikhathi engela oyifunayo (naiskok), khona-ke clip umthwalo kuzokhulisa kakhulu. Kulokhu, into ngeke igoqe ngesikhathi amakhilomitha ayinkulungwane kuqala. Elinye iphuzu elibalulekile - amandla kokuqina. Uma esikhundleni the master kanzima some sihlobene nut, umthwalo nakho kuzokwanda izikhathi eziningana. Into uzobe njalo ukufuthelana. Ngenxa yalokho, wona futhi idinga UAZu esikhundleni Amabombo Kit.
Indlela ukunquma ukuwohloka kwamangqamuzana?
Njengoba isici asebenzayo baxhumana ihabhu, ukubhidlika okuzohlobana ne isondo. Nquma nithela ukwehluleka ilula ngokwanele. Sendleleni, uyolizwa "ziwe ezomile" (umqulu izindlela eyindilinga). Lokhu kusho ukuthi indandatho kwangaphakathi sinqamukile kanye izinaliti ukuphotha Ukuboshelwa. Ngokuhamba kwesikhathi, umsindo ngeke kube kukhulu. Ngaphezu kwalokho, le nkinga kungase kuhambisane kunyakaza. Abakwazi zidlulele amasondo ayo futhi emzimbeni uqobo. Kuyingozi kakhulu kutsi bagibele imoto enjalo, ngoba kukhona ingozi amasondo nhlonhlo. Ngesivinini, kungabangela skid ongalawuleki.
Uma ukuziba inkinga bese uqhubeke, imoto uqala ukudonsa nganxanye. Kuyoba njalo eyolanda isondo ukuqhubeka ukunyakaza rectilinear.
Indlela esikhundleni? Ukususa ihabhu
Inzuzo design off-road ka Ulyanovsk ukukhiqizwa ulula. Ngakho-ke, esikhundleni ihabhu ezingemuva nithela UAZ kungaba yezandla zabo. Ngakho, qala ukusebenza. Okokuqala sidinga jacking imoto, emva kokuba imishudo ephukile ye yasibamba kwamasondo. Imoto ipakiwe phezu ukubopha yokupaka. Ngaphezu kwalokho, kutuswa ukufaka isondo chocks. Ukuze ususe ukuzala, kubalulekile ukususa yonke ihabhu. Okokuqala, Khipha disc ukubopha. Okulandelayo, uyasikrufulula nezikulufi ezintathu eyisithunjwa ezisebusweni cap emikhonweni off amasondo. Susa izakhi kanye sokulalela inhliziyo ezibuhlungu imishudo eziyisithupha ubambe bamba uqobo. Ngakho-ke kubalulekile ukuba ulungise lokwela ihabhu inhlangano. Uma kungenjalo, uzobonakala pheqela ngesikhathi Ukudilizwa izakhi. Ngemva isizinda emikhonweni ukwenqaba ithebhu Washer kakhiye kanye locknut uyasikrufulula ihabhu uqobo. Ngokulandelayo, ukukhipha Washer usebenzisa ukufakwa kokumqoka kuphela lokususa. Uyasikrufulula nut inhlangano ihabhu ngokwayo ihabhu.
Ngakho, ihabhu ezandleni zabo - ihlala yodwa ukususa amabhethri ubudala futhi ufake entsha. Kuze kube yimanje sithatha a ukufakwa kokumqoka kuphela futhi kukhishwe iringi engaphakathi ihabhu. Kungxenye yokugcina futhi waphuma. Sicela uqaphele ukuthi kufanele asuse indlala ngoba ukuliqaqa iseli. Kuyinto alahlwayo futhi akukwazi kabusha ukufaka. In the isinyathelo esilandelayo wagxila Washer Kit akhiphe omentum kanye kwangaphakathi eziveza indandatho everted. Zonke izinto zisusiwe ukuba zihlanzwe - ungasebenzisa uphethiloli noma uphalafini cwilisa isici. Ukusungula isikhungo esisha ebizwa kwi UAZ, sinake isimo kokuzalela naye izakhi. Kumele kube mahhala nezakhamuzi, imihuzuko nezinye izimpawu zokuguga. Lapho esikhundleni kuyahlukahluka njengoba kwangaphakathi futhi yangaphandle eziveza Izikhumulo.
Ukuze ucindezele out element endala, sebenzisa ithuluzi ekhethekile. Ngomusa ngawakhamela izimpondo kwangaphakathi futhi yangaphandle emvula indandatho bese idonsa izinto ngaphandle.
Hhayi ukukhweza ilungu ngesando noma ezinye izinto ezitholakalayo. Ukuze ugweme skewing, sebenzisa mandrel. Wakhe sizobe ukushumeka eziveza izindandatho ezintsha. Ngemva kokufaka yimpumelelo kufanele uhlole izinga ilungu kokufika. Ukunikeza izindandatho akumelwe akhanyiswe ngesandla amandla. inhlangano ephakeme kwenziwa oda reverse. Iphuzu elibalulekile: ulandele torque kokuqina we esindayo. ukulungisa nut kumele some ngebutho 30 kuya 40 Nm. Vula isondo poddomkrachennom imoto ngesandla - kumele kube lula ukuze uphendukisa. Nakuba sivumele igebe encane. Asikho isidingo qinisa nut ukulungisa kuze eyeka - sihlobene kumele kube ukushisa imvume.
Hlola "izinaliti" we amafutha ngaphambi kokufaka esindayo. Ngokuvamile, abakhiqizi musa abike amafutha. Ngenxa le nsiza uwela kakhulu. Njengoba uhlobo Lubrication, sebenzisa kuphela ezikhethekile - isondo amabombo. Ngiphakathi nendawo "Litol" noma "grafitka" ngeke zisebenze.
Ngakho, thina esiphethweni kanjani ngokuzimela esikhundleni eziveza labaculi ku imoto UAZ futhi yiziphi izimpawu zaso ukwehluleka. Ukuze ugweme bafake ngaphambi kwesikhathi, kubalulekile ukuhlinzeka eliphezulu ilungu inaliti amafutha ukuqeda Ukuhlanekezelwa phakathi nokufaka.
DAAZ 2107: umshini emotweni lapho kuhlanganiswa khona umoya nomusi kaphethiloli, isimo sawo futhi isiqondiso
Kungani isidingo semi iloli
Zezinwele ubuso okwedayimane: Photo kanye nezincomo